We.com.mm - “ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကားများ ”
“ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကားများ ”
အားလုံးကချစ်စနိုးဖြင့် အူဝဲ လို့ခေါ်ကြတဲ့အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင် ကို 24.4.1977 ရန်ကုန်မြို့ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒဂုံ(1) တွင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်ဖြင့် ကျောင်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ ၉၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အနုပညာလောကထဲသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ချစ်စဖွယ် အမူရာလေးတွေကြောင့် ပရိသတ် စတင်သတိထားမိခဲ့ရာမှ ၉၇ ခုနှစ်တွင် ကံကြမ္မာအလှည့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွင် လူမင်းနှင့် စတင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင် နှင့် ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး 2004 ခုနှစ်မှာ မျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဖြင့် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 2011 ခုနှစ်တွင် ပြေတီဦးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Fashion Queen လို့ တင်စားကြတဲ့ သူမဟာ အနုပညာလောက ရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်လျှက်ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမှီကလည်း ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာလည်း ဂုဏ်ယူစရာပါ။
သူမရဲ့ အနုပညာ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
- အဖြူရောင်အတ္တ ( မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ လှအဉ္ဇလီတင့် )
- ကျွန်တော်ကျွန်မတို့သည် ( ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ မျိုးသန္တာထွန်း ၊ ရီဝေယံ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- နှလုံးသားလျှို့ဝှက်ခန်း ( ကျော်ဟိန်း ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အသည်းကိုလေလံပစ်မယ် ( မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အချစ်သင့်သူ ( မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အချစ်ကိုစားသော ကိန်းဂဏန်းများ ( လွင်မိုး ၊ ခိုင်သင်းကြည် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မမုန်းလေနဲ့ ငပလီ ( ရန်အောင် ၊ ဒွေး ၊ မေသန်းနု ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- သမီးရှင် ( ဒွေး ၊ ရန်အောင် ၊ ခင်သန်းနု ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မျိုးသန္တာထွန်း )
- ပျော်ကြရအောင် ( လွင်မိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ရွှေရောင်လွှမ်းသောမနက်ဖြန်လေးများ ( မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အိပ်မက်ရာသီ ( ဒွေး ၊ နေတိုး ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ပဉ္စလက်ရင်ခွင် ( ဒွေး ၊ ထက်ထက်မိုးဦး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ လှအဉ္ဇလီတင့်)
- သင်၏ချစ်လှစွာသော ( လွင်မိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ဆုပန်ထွာ )
- စိတ်မရှိနဲ့ ချစ်ကြည့်မလို့ ( လွင်မိုး ၊ ခိုင်သင်းကြည် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ရင်ဝှက်ပန်း ( ဒွေး ၊ လူမင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မပြောင်းလဲသောအကြောင်းတရားများ ( လွင်မိုး ၊ နေအောင် ၊ ထွန်အိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အချစ်သည်လေပြည် ( ဒွေး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ရင်တွင်းစကား ( ဒွေး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မင်းနဲ့မှချစ်တြတ်ပီ ( ဒွေး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ဒုတိယမြောက်ရိုမီယို ( မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- သူးမွဲထသစ္စာ ( လူမင်း ၊ ညွန့်ဝင်း ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မေသန်းနု )
- အစိမ်းရင့်ရင့်လမင်း ( နိုင်းနိုင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ချစ်ခြင်းရင်ခုန်ယုံကြည်စွာဖြင့် ( ဒွေး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ တင့်တင့်ထွန်း )
- လမင်းကိုစိန်ခေါ်ကြသူများ ( လူမင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- နေကမွေးတဲ့လ ( ကျော်ဟိန်း ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ တင့်တင့်ထွန်း )
- အိပ်မက်နတ်သမီး ( ဒွေး ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မျက်နှာများတဲ့ ကောင်းကင် ( ရန်အောင် ၊ လွင်မိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ တင့်တင့်ထွန်း )
- သင်္ကြန်ဝေးဝေး ( လွင်မိုး ၊ ခန့်စည်သူ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မှော်ဝင်ကြိုး ( လူမင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ဆုံစည်းစေ ( ရာဇာနေဝင်း ၊ ဖြိုးငွေစိုး ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ပင်လယ်မင်းသား ( လွင်မိုး ၊ ရာဇာနေဝင်း ၊ နန္ဒာလှိုင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ဆုပန်ထွာ )
- ရင်ခုန်သံအရင်းနှီးဆုံး ( ဒွေး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- နောက်မကျကြေး ( ဒွေး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ခိုင်သင်းကြည် )
- စတိုင် ( လွင်မိုး ၊ ရာဇာနေဝင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ စိုးမြတ်နန္ဒာ )
- ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြုံး ( ကျော်ရဲအောင် ၊ နန္ဒာလှိုင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အချစ်ရဲ့နယ်စပ် အမုန်းရဲ့မြို့ရိုး ( ဒွေး ၊ ကျော်ရဲအောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ နဝရတ် )
- ငိုအားထက်ရယ်အားသန် ( လွင်မိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ကြိုးနှစ်စ ( ဒွေး ၊ တင့်တင့်ထွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ချစ်ခြင်းဖွဲ့မေတ္တာ ( ဒွေး ၊ တင့်တင့်ထွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ခိုင်နှင်းဝေ ၊ မြတ်ကေသီအောင် )
- သုံးသုံးလီချစ် ( ဒွေး ၊ ရန်အောင် ၊ သျှားညို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ စိုးမြတ်နန္ဒာ ၊ လှအဉ္ဇလီတင့် )
- ကမ္ဘာအဆုံးထိ ( ထွန်းထွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မော်ဒန်အချစ်များ ( လွင်မိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မိုက်တီးလေးများ ( လွင်မိုး ၊ လူမင်း ၊ ရာဇာနေဝင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ဒီကောင်ဘယ်သူတုန်း ( နေတိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ဝင်္ကပါအချစ်နှင့် သူ၏ချစ်ကိုကိုချစ် ( မင်းမော်ကွန်း ၊ နေတိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မိုးပေါ်ခုန်တက်ကလိုက်ချင်ပါတယ် ( နေတိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မြင်းမိုရ်ထက်ကသရဖူ ( နေတိုး ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အကယ်ဒမီရှော့ ( နေတိုး ၊ ရဲအောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ချောရတနာ )
- ချစ်လို့စတာ ( ကျော်ရဲအောင် ၊ နေတိုး ၊ တင့်တင့်ထွန်း ၊အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ဟော့ရှော့ ၂ ( သူထူးစံ ၊ မိုးအောင်ရင် ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မယ်လိုဒီ ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် )
- ချစ်ကံပွင့်နဲ့ မချောလေးဆယ် ( ရန်အောင် ၊ ဟိန်းဝေယံ ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ ( နိုင်းနိုင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မာမီရှိန်း ( နေတိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ရှော့ရှိတဲ့အချစ်များ ( ခန့်စည်သူ ၊ ပြေတီဦး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မိုးဟေကို )
- အတိတ်ရဲ့အရိပ် ( အောင်သူရ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အတည်ပေါက်နောက်တဲ့လူ ( ခန့်စည်သူ ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- နတ်ဖက်တဲ့စုံတွဲများ ( ပြေတီဦး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ နန္ဒ ၊ သက်မွန်မြင့် )
- ဟတ်ထိတယ် ( ရန်အောင် ၊ ရဲအောင် ၊ သူထူးစံ ၊ မိုးအောင်ရင် ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ၊ စိုးမြတ်သူဇာ ၊အိန္ဒြာကျော်ဇင် သင်ဇာဝင့်ကျော် )
- အချစ်လား...လာထား ( မင်းမော်ကွန်း ၊ ခန့်စည်သူ ၊ ကျော်ကျော်ဗို ၊ မိုးအောင်ရင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ခိုင်သင်းကြည် မယ်လိုဒီ ၊ စိုးပြည့်သဇင် )
- ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ( နေတိုး ၊ ကျော်ကျော်ဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း )
- ဖလန်းဖလန်းဖြစ်တဲ့အချစ် ( ရန်အောင် ၊ နေတိုး ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အားလုံးကဟော့မှကြိုက်တယ် ( ပြေတီဦး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ အေးမြတ်သူ )
- ချိန်း ( နေတိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- အချစ်ကွိုင် ( ဟိန်းဝေယံ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မေခင်ကညာ ( ပြေတီဦး ၊ ခန့်စည်သူ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် )
- ငါမင်းကို ( လူမင်း ၊ ပြေတီဦး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မိုးဟေကို )
- သွားလူဆိုး ဒါမျိုးတော့တတ်တယ် ( ပြေတီဦး ၊ ကျော်ရဲအောင် ၊ နေမင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ စိုးမြတ်သူဇာ )
- အဖြူရောင်ရဲတိုက် ( နေတိုး ၊ ပြေတီဦး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ကြယ်စင်မော်ကွန်း ( လူမင်း ၊ နေတိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ သက်မွန်မြင့် )
- ချစ်စံအိမ် ၂၀၂၈ ( လူမင်း ၊နေတိုး ၊ ပြေတီဦး ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ မြင့်မြတ် ၊ ထွန်းထွန်း ၊ နေမင်း ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ မိုးဟေကို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ၊ စိုးပြည့်သဇင် ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် ၊ ချစ်သုဝေ )
- နှင်းဆီပန်သူ ( နောင်နောင် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- မောင့်အိမ်သူ ( လူမင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
- ရင်ဘတ်ထဲကဓား ( ပြေတီဦး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို )
- ကြီးလေးကြီး ( လူမင်း ၊ ခန့်စည်သူ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ခိုင်သင်းကြည် )
၁. အမျှ အမျှ ( ခန့်စည်သူ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
၂. ရူးအောင်ချစ်မဲ့လူ ( နေတိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မေတိုးခိုင် )
၃. ဝုန်းပစ်လိုက်မယ် ( ကျော်ရဲအောင် ၊ ကျော်ကျော်ဗို ၊ ရဲလေး ၊ စိုးမြတ်သူဇာ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ သင်ဇာဝင့်ကျော် )
၄. ကျွန်မအချစ်ဆုံး ယောကျာ်းသုံးယောက် ( ရန်အောင် ၊ ပြေတီဦး ၊ မင်းဘုန်းမြတ် ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မို့မို့မြင့်အောင် )
၅. ကြတ်ဂူ ( လူမင်း ၊ မြင့်မြတ် ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
၆. တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေ ( အောင်ရဲလင်း ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ပိုင်ဖြိုးသု )
၇. အချိုဆုံးအချစ် အပြင်းဆုံးအဆိပ် ( အောင်ရဲလင်း ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ခင်ဝင့်ဝါ )
၈. လေဒီဒိန်းဂျား ( ခန့်စည်သူ ၊ ခါရာ ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် )
၉. Reflection ( ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ၊ ပက်ထရစ်ရှာ )
၁၀. The String ( ဖြိုးငွေစိုး ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ ရွှေအိမ်စည် )
၁၂.အာဒံများနဲ့ နံရိုးများ (လူမင်း ၊ ပြေတီဦး ၊ မင်းမော်ကွန်း ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မိုးဟေကို )
နောက်ထပ် အကယ်ဒမီ တွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ အူဝဲဇာတ်ကားတွေ အကုန်နီးပါးကြည့်ဖူးရဲ့လား?
နှင်းဆီအရည်က မျက်နှာနဲ့ဆံပင်အတွက် အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာသိကြရဲ့လား?
ဆူးဘီး မလိုပဲ ဆံပင်ပုံသွင်းမယ်။
သူမအတွက် အသက်ဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါပဲဆိုတဲ့ Lure Hsu
Makeup Brush နဲ့ Beauty Blender တွေကိုဘယ်လိုသန့်စင်မလဲ
3 months ago by Sora